Polymer powder Factory - China polymer powder Abakhiqizi, abahlinzeki
I-RDP VE3011 ye-Formaldehyde-free ikakhulukazi yokuhlobisa udonga lwangaphakathi lodaka lwe-diatom
I-ADHES® VE3011 yinto engeke ichazwe kabusha-i-polymer powder esakazekayo isuselwa ku-vinyl acetate-ethylene copolymer, efaneleke kakhulu odakeni lwe-diatom izinto zokuhlobisa futhi self-yokululama phansi nosimende. ADHES® VE3011kabusha-i-polymer powder esakazekayo kuyinto i-formaldehyde-free, ukukhishwa okuphansi umkhiqizo. Ingasetshenziselwa ukwakha imikhiqizo ehlangabezana nezidingo ze-Indinganiso yaseYurophu EMICODE EC1PLUS.
Ngesikhathi sokusebenza kokwakhiwa, i-ADHES® VE3011 i-polymer powder ephindaphindekayo inganikeza i-rheology nokusebenza kahle kakhulu, ithuthukise kakhulu ukugeleza nokulinganisa, ukunciphisa isidingo samanzi. Lapho kusenziwa lukhuni isigaba, udaka olune-VE3011 olusakazeka kabusha lwe-polymer powder luzoba nokubukeka okuhle kokugcina nokuqina, amandla aphezulu wokugcina nokuhlangana okuphezulu, kukhulise ukuguquguquka, kuthuthukise ukuqina komjikelezo weqhwa, ukuncipha kokuqina kokuqina kanye nokumelana nomthelela.
Ngesandla Esiqinile RDP AP2160 for C1T C1TE C1F isichuse ingcina
I-ADHES® AP2160 iyi- redispersible polymer powder (RDP) kususelwa ku-ethylene-vinyl acetate copolymer. Ifanele usimende, i-lime ne-gypsum based modifyingUdaka wokuxuba owomile.
Ngesikhathi sokusebenza, redispersible polymer powder I-AP2160 inokuhlakazeka okuhle, ingathuthukisa ukusebenza nempahla ye-rheological yodaka, inwebe isikhathi sokuvula.
Ngesikhathi sokuqina kokuqedwa, kunikeza udaka oluhle kakhulu amandla okubopha, thuthukisa amandla wokumelana nokugqoka, wandise ukuhlangana futhi amandla.
Ngesandla Esiqinile RDP AP2080 for tile ingcina
ADHES ® AP2080 I-Polymer Powder ehlakazeka kabusha (RDPI-polymer powders eyenziwe nge-ethylene-vinyl acetate copolymer. Lo mkhiqizo unamathela kahle, i-plasticity, ukumelana namanzi kanye nekhono le-deformation eliqinile.
I-Polymer Powder ehlakazeka kabusha (RDP) inokuguquguquka okuhle kakhulu, izakhiwo eziqinile zepulasitiki kanye nokulimaza kanye nekhono elinamandla lokuguqula ukuze kwandiswe i- amandla okunamathela phakathi kodaka nokusekelwa okuvamile futhi uthuthukise ukusebenza komshini kodaka. Ku-polymerusimende nosimende, ingakhuphula izinto zokulwa nokugoqa nokulwa nokungezwani. Ngakho-ke, inhle kakhuluukusebenza anti-ufa, okungavimbela izinto ukuthi zingahlehli kahle.
I-VAE Isatshalaliswa kabusha i-polymer powder i-AP1080 yodaka oluxubekile olomile lwe-CAS 24937-78-8
I-ADHES® AP1080 iyi- kabusha-i-polymer powder esakazekayo ngokusekelwe ku i-ethylene-vinyl acetate copolymer (VAE). Umkhiqizo unamathela kahle, i-plasticity, ukumelana namanzi kanye nekhono lokuqina lokuqina; ingathuthukisa ngempumelelo ukumelana okugoba nokumelana nokuqina kwento ku-polymerusimende nosimende.
Re-i-polymer powder esakazekayo ingahlakazeka emanzini, ikhuphule ukunamathela phakathi kodaka nezingxenye zalo, futhi ithuthukise impahla yomakhenikha nokuphathwa kwayo. Re-i-polymer powder esakazekayo okuhle kakhulu amakhemikhali wokwakha, ingathuthuka usimende-based usimende, ukusebenza kokunamathela kwe-tile.
Isitayela se-Styrene-Acrylate Copolymer Re-dispersible Polymer Powder AX1700
I-ADHES® AX1700 iyi- kabusha-i-polymer powder esakazekayo ngokusekelwe ku i-styrene-acrylate copolymer. Ngenxa yobuningi bezinto zayo zokusetshenziswa, ikhono lokulwa ne-saponification le-AX1700 linamandla amakhulu. Ingasetshenziswa kabanzi ekuguqulweni kwe-udaka oluxubekile olomile okokumbiwa kwesamente okunezinto ezifana nosimende, umcako wesilayidi ne-gypsum.
I-ADHES® AX1700 kabusha-i-polymer powder esakazekayo nikeza ngokusebenza okuhle, ukusetshenziswa okulula kwe-trowel nokuhle ukusebenza kokubopha, futhi inganciphisa ukumuncwa kwamanzi, inyuse ukuguquguquka, ukunamathela okuhle ezigabeni ezahlukahlukene ezifana nebhodi le-polystyrene foam, ibhodi loboya bezamaminerali. Iziduli ezine I-RD Powder I-AX1700 izoba nokumelana okuhle kokugqoka, okuphezulu amandla okubopha, nokuqukethwe kwegesi ephansi odakeni.
I-Hydrophobic Re-dispersible Polymer Powder VE3311 impahla engenamanzi
I-ADHES® VE3311 I-Polymer Powder ehlakazeka kabusha kungokwama-polymer powders enziwe yi-ethylene-vinyl acetate Copolymer, ngenxa yokwethulwa kwe- i-silicon alkyl izinto zokwenziwa ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, i-VE3311 inamandla i-hydrophobic umphumela nokusebenza okuhle; eqinilei-hydrophobic umphumela futhi omuhle kakhulu amandla eqine; ingathuthukisa amandla we-hydrophobicity namandla okubopha udaka ngempumelelo.
I-Polymer Powder ehlakazeka kabusha I-VE3311 isibopho se-polymeric futhi ihlinzeka ngefayela le- i-hydrophobic umphumela. Ihlanganiswe nezibophelelo ezingajwayelekile, impuphu izonikeza ngokusebenza okuhle kakhulu; osimende belashwa nge-VE3311 ithuthukise ukunamathela, ukuvumelana nezimo, ukukhubazeka nokumelana nomhuzuko.
Njengomphumela wokwakheka okukhethekile kwempuphu, odaka abalungiswe nge-ADHES® VE3311 bazoba nomthelela ohlala njalo ukuxosha amanzi.